Sare '80s Songs of Trio Rock Trio Booliska
Muusikada 80s Hits
'Top' 80s Songs of the Police
Inkastoo kooxdu ay sii daysay saddex albaab oo kaliya oo albaabbada 10-kii sano ee la soo dhaafay ah, haddana cusub oo rikoodhadh ah oo bilaash ah Boolisku waxay cayaareen waxoogaa riwaayad ah oo tayo sare leh, gaar ahaan marka la barbardhigo qaar badan oo ka mid ah seddexda wiil ee '80' LP. Natiijada, ka shaqeynta shaqada ugu wacan ee liiska ugu sarreeya liiska "Top 10" waa mid aad u adag marka loo eego xaqqa jiritaanka, iyadoo la siiyay niyadjab nolol maalmeedka Booliska. Hase yeeshee, waxaan qiyaasi karnaa waxa dhici lahaa, laakiin ugu yaraan waxaan helnay saddexdaas buundood iyo buugaagta qoraalka iyo farsamooyinka aan fiicnayn ee Sting & Co..
"Ha u istaagin si aad u dhow"
Booliska (LR Sting, Stewart Copeland, iyo Andy Summers) waxay ka sameeyaan marxaladda New York City, 1980. Michael Putland / Getty Images
Tani waa arin ujeedkeeduna yahay midda ugu horeysa ee bilicda ah ee Booliska, laga bilaabo qalinka imtatiijiga ah ee qalinka ah ee heesaha heesaha hoose ee Sting. Sida caadiga ah ee qoraallada farshaxanka ah, heesku wuxuu udubdhigaa sheeko macquul ah oo ka buuxa xajmiga suugaanta iyo xajmiga. Iskudhin iyo jimicsi labadaba, waa muusikada muusiga ee farshaxanka sare. Nabokov waa muuqaal laakiin ma ahan kuwo daalan, iyo guitada naxdinta leh ee ka socota Andy Summers iyo wizardry curkaanka ah ee Stewart Copeland ee duufaanta ayaa bixiya layers badan oo soo dhaweyn ah. Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan dhagaxyada caadiga ah ee laga soo bilaabo Booliska, iyo hawada sare ee hawada oo aan cidhiidhi ahayn.
"La qabsaday ilmo"
Tani waa ciqaab aad u xun oo laga soo bilaabo 1980-kii taas oo soo ifbaxday xoogaa aad u xoogan, dabacsanaan iyo dhagax cad oo rogrogasho ah oo ka badan bandhiga band ee waligood muujiyay. Muusigga ayaa si cad u muujinaya halkaan, gaar ahaan qaar ka mid ah shaqooyinka ciriiriga ah ee laga soo bilaabo Summers. Laakiin haddii aad rabto inaad fikrad ka hesho mashiinka bilayska sida ugu wanaagsan, tani waa wadada dhabta ah ee bixisa dareenka kooxda sida xoogga nool ee awood leh. Damalka siyaasadeed ee heesaha ayaa walwalaya xitaa haddii uu yahay mid ka sarreeya.
"Marka Aduunku Dhameysto, Waxaad Samayn Kartaa Wixii Ka Fiican"
Had iyo jeer waa habka ugu sahlan ee lagu calaamadeyn karo Booliska oo ah isku dhaf ah dhagaxa, pop, iyo reggae , laakiin runta ayaa ah inay kooxdu marwalba u leedahay inay qaadato mid kasta oo ka mid ah noocyadaas oo ka sarreeya calaamadahaas. Tani weyn, dareen kacsan oo ku saabsan shisheeye waa tusaale wanaagsan oo ka mid ah qaabka shakhsi ahaaneed Booliska ayaa bilawday isla markaana ku dhowaad xuquuqda daabacaadda ee 80-kii hore. Sting wuxuu ka hadlaa kacdoonada, laakiin inta badan wuxuu ku dhufanayaa hadal hufan oo ku dhow dooxada qulqulka -hip-hopka ah, kooxduna waxay u egtahay mid kale ka hor ama ka dib.
Inkastoo ay u muuqato in macnaheedu yahay in Sting uu ka soo leexday suugaankiisa, mararka qaarkood heesaha qoraalka ah ee gabaygani wuxuu u dabaaldegaa xuduudaha luqadda, wuxuu fikraddan si xushmad leh u jecel yahay tan, mid ka mid ah erayada ugu xiisaha badan. Sida caadiga ah, qaboojiyayaashu waa kuwo aad u weyn oo xurmo leh, laakiin waxa runtii ka dhigaya heesida heesaha waa Sting awoodda qarsoodiga ah inuu ka tago isagoo ereyga ku sharaxaya sida "jeegaga ka tegay mid ka mid ah bangiyada qalalaasaha" maskaxdiisa. Kaliya darajo gaar ah oo ereyada ah ayaa sameyn kara shaqadaas.
"Wax walba oo yar oo sheeko ah waa sheeko"
Sida heesaha heesaha, Sting ayaa maaraysay mawduuc ka mid ah jacaylka jacaylka ah ee xaglo badan, lakiin marnaba lumiyo casriga aragtida ama keenista. Muuqaalkan 1981 ayaa u dabaal-dagaya wax walba oo farxad ku leh jacaylka jaceylka iyadoo la joojinayo oo kaliya gaabiska Sting ee caadiga ah ee loo gaabiyo gogol-xuduudaha madow ee rabitaanka iyo rabitaanka. Xitaa markaa, cabsida dhicitaanka iyo diidmada iyo caawinta ku heeso hees si heer kale. Musikada mowduucyada ayaa ah mid farxad ku leh kubada cagta, Sting ayaa si weyn u xajisanaya heesaha iyo heesaha, iyo Copeland's distinct distumming.
Taageerada dhalinyarada ah ee muusikada dhagaxa ah , waa wax aan macquul ahayn inaanan haysan 80% oo ah erayga Sting oo madaxaaga ka baxaya. Ama ugu yaraan taas waa waxa aan jeclahay in aan nafteyda u sheego si aan u dareemo fiicnaan. Haseyeeshee, waxa ay tahay, waxa uu yahay dhagaystaha cadawga ah ee weerarka hore ee heerarka kala duwan, maaha ugu yaraan taas oo ah sheekooyinka gabay iyo gaaban ee gabay, oo si toos ah u galaya fowdo iyo raaxo darro. Qalabaynta iyo isdaba-marinta way cadahay, laakiin qeexitaanka Sting's sheekadu waxay qaadataa dadaal, maaddaama ay inta badan ku sameyso siyaabo farxad leh oo ku saabsan wadooyin badan oo laga soo qaaday albaabkii weynaa ee 1983.
"Neef kasta oo aad qaadato"
Maxaa kale oo looga tagay in uu ka hadlo arrintan, oo ah in uu noqdo mid u dhow sida ugu wanaagsan ee la iswaafajiyey tan iyo Beatles 'boqor ka ah adduunka muusikada? Mustaqbalka, Sting wuxuu isku dayey inuu yahay mid aad uwanaagsan, marwalba awood u leh in uu ka faa'iidaysto waxqabadka labada isku-dhafan oo adag iyo isku-dhafan la'aan iyadoon la dhicin maskaxdii ugu xumayd. Sheekooyinka cajiibka ah, guitar runtu waa muhiim u ah guusha gabaygiisa sida gabayada, laakiin dhismaha mawduuca laftiisa waa cashar aasaasi ah oo loogu talagalay gabay cusub.
Sheeko kasta oo aan ka hadlo waxay keenaysaa xanuunka qallafsan ee bilicda ah ee Bileyska oo ah qaab cusub oo cusub sida haddii ay jiraan marwalbo cusub oo masiibo ah si loo ogaado ku saabsan jiritaanka gaaban ee quruxda badan. Haa, taasi waa hab la yaab leh oo lagu riixo, laakiin tixgelin sidan: Xilligaas Sting oo ka fogaaday Booliska, jaanisnimadiisa, dabacsanaantiisa, iyo jilicsanaanta ayaa u muuqatay in ay hoos u dhaceen. Hantida hal-abuurka ah ee Bileyska sida lagu cadeeyay gabaygan ayaa ahaa sidii filim iyada oo weli wali ka sarreeyo.
"Ku duugay Fartaada"
Mid ka mid ah waxyaalihii ugu weynaa ee ku saabsan Sting oo ah heesaha heesaha waa inuusan marnaba la hadlin dhagaystayaasha uu ku hadlayo. Waxaan ula jeedaa, dhab ahaantii kama dhexgalin gabaygan, tixraacidda Scylla iyo Charybdis ee xariiqda koowaad. Heerka gabayguna waa sida maskaxda, laakiin Sting waa sheeko khibrad leh iyo lyricist ah in nidaamyadiisa iyo qaylo-dhaanta uu marnaba u muuqan mid xuma, xitaa marka ay tahay inay ku haboon tahay "Mephistopheles." Dhab ahaan, waxaa jira sabab uu booliisku marwalba u ahaa mid ka mid ah xulashooyinka yar ee lagu xusay "wada hadalka ugu weyn-weligiis". Xitaa xitaa maaha in gabaygani uu si xeeladeysan u dhexjirto gudaha dhagaxa jilicsan .
Baaskiil-wadareedka qunyar-socodka ah, mowqifkani waxa uu ahaa dabeecad qeexan oo ah Sting's marxaladaha dambe ee muusiga adduunka . Sidoo kale waa sawir loogu talagalay Andy Summers 'jasiirada' jazz guitar 'iyo, dabcan, xirfad dhamaystiran ee Stewart Copeland oo ka dambeysa xirmada bidixda. Xubin kasta oo ka tirsan Booliisku waxay sameeyeen waxyaabo badan oo qiimo leh sida shaqsiyaadka, muusikada, iyo qalabyada, laakiin waa inay ogaadaan dadaalkan aan waligeed isbarbar dhigi doonin waxa seddexdaas la qaban karo.
Hore ugu sareeysii REO Speedwagon Songs of '80s
Top Asia Songs ee '80s
Top Dire Straits Heesaha '80s
Top 10 Albaabada 1982
Top Marshall Crenshaw Songs of '80s
Abaalmarinta 5aad ee ABC Songs of '80s
'Top' 80s Songs of The Smithereens
Top Steven Winwood Songs of '80s
Top Songs of Songs '80s
Top Pop iyo Rock Songs From 1984
Heesaha ugu caansan ee wadnaha ee '80s
Yaa Qoray "Tani Yar Yar ee Mine"?
Munaasabada Dhaqanka Hiddaha Dhaqanka
12 Xiddigaha Horyaalka ah ee Jooga Kaliya Wareega Waddanka Maraykanka ayaa ahaa
Taariikhda Muslimiinta Madow ee Maraykanka
Magacyada Kiimikooyinka Nidaamka ah
Biology Prefixes iyo Suffixs: chromo ama chromo-
Qeexitaanka Faahfaahinta Ficil-qorista
Filinka Ahaa - Filimka dhaqdhaqaaqa Japanese-ka ah
Dhibaatooyinka Dhibaatada Goolka iyo Ciyaar Masawirin ah oo kaa caawiya inaad ku tababarto
Dhaqanka Faransiiska Maalinta Jacaylka: Sheekada Laba Biloodle ah
Acupuncture sida daaweynta bogsashada
Qeexidda Qodobka Xawaaladda ee Aliphatic
Neutron Stars waxay ku soo wada jeedaan Flash-ga cusub
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada caalamiga ah ee kuleylka
Judith of France (Judith of Flanders): Saxon Ingiriis Queen
Qaybaha Falanqaynta ee la Xariira Mushaarada
Falcelinta Redox - Tusaalaha Isu-dheelitirka ee Balanced
Gemini iyo Kalluumeysatada: Ubadkooda Jacaylka
Horumarinta Bangiga ee Kacaanka Warshadaha
Tallaabada Adiga: Taabashada koowaad ee kubadda cagta
Nadiifinta Qawaaniinta Qodobbada ee Jidhka Jirka
Ganacsiga Ganacsi ee ugu Qodobada badan leh ee Bilowga Mushaharka
Isku dheellitirnaanta dheelitirka iyo isgoysyada dhamaadka ah Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka
Charles Hamilton Houston: Xeer Ilaaliyaha Xuquuqda Rayidka ah iyo Wakiil
10 Kitaabka Quduuska ah ee Dhaniga Ah: Ha haawin waxa aanad haysan
Cómo borrar waxay diiwaan gashan tahay dambiile ku salaysan Caadiga ah